Eray bixinta Program-yada iyo casharrada Somali Software
Markaan billawnay hawlaha la xiriira af-soomali ku qoridda aqoonta kumbiyuutarka waxaa noo qorshaysnaa in wax kasta aan ku qorno af-soomali sooc ah oo program-yada iyo casharrada Somali Software ay ku qornaadaan af-soomaali kaliya. Si aan ujeeddadaas u gaarno waxaa noo soo baxday inaan u baahanahay eray bixin cusub. Ka dibna waxaan samaynay baaritaan iyo falanqayn ku saabsan waxa ay keeni karto eray bixin cusub iyo heerka aqooneed ee aan u leenahay xagga luuqadaha ama eray bixinta lafteeda.
Baaritaan iyo fiirfiirin muddo ah kadib waxaa nala qummanaatay in wax eray bixin cusub ah aanaan samaynin iyo in erayada aan af-soomaaliga laga helin aan u soo qaadanno ingiriis ahaan, islamarkaana aan sharraxaad ka bixinno micnaha iyo isticmaalka ereyadaas. Taas waxaan u yeelnay sababaha soo socda dartood:
Wax sahlan ma aha in eray bixin cusub la sameeyo oo waxay u baahan tahay aqoon dheeri ah oo ku saabsan xagga dhismaha iyo nuxurka luuqadda Soomaliga iyo guud ahaan aqoonta xagga luuqadaha (linguistics). Waxa kale oo ay u baahan tahay wakhti dheeri ah oo looga baaraandego, taasoo keeni karta in halkii aan wax ka qori lahayn aan ku mashquulno dood iyo falanqayn ku saabsan eray bixinta. Haddaba waxaa noo muuqatay in arrintaas aynaan wakhti u helayn aqoonteedana aynaan lahayn.
Waxaa noo muuqatay in haddiiba aan indha adayg isticmaalno oo aan eray bixin af-soomaali ah samayno aan lagu heshiinayn, oo ay dhici karto in dad kale oo iyaguna wax ka qoray mawduucaan ay isticmaalaan erey bixin kale oo ka duwan taan isticmaalnay. Taasina waxay jahawareer u keenaysaa dadka wax baranaaya, waxayna caajis gelineysa xiisaha iyo rabitaanka ay dadku u qabaan akhrinta iyo ka faa'iidaysiga buugaagta iyo program-yada af-soomaaliga ku qoran oo ka hadlaaya dhinaca cilmiga.
Waxaan ka fikirnay in buugaagta laga barto kumbiyuutarku ay inta badan ku qoran yihiin luuqadda ingiriisiga. Sidaa darteed haddii uu qofku erayadaas ingiriis ahaan ku barto way u sahlanaan doontaa inuu fahmo buugaagta kala duwan ee ka hadlaysa mawduucaan. Haddiise uu hadda af-soomaali ahaan ku barto islamarkaana uusan heleyn buugaag af-soomaali ku qoran oo haqabtirta baahidiisa aqooneed, ay imaanayso inuu isla erayadii fahmi waayo markuu iyagoo ingiriis ah ku arko buugaagta kala duwan.
Sidaas daraadeed waxaan qorayaasha iyo aqoonyahannada soomaaliyeed u soo jeedinaynaa in la iska daayo eray bixinta uu qof kastaa gees ula cararayo oo laga wada shaqeeyo sidii loo kulmin lahaa dadka iyagu aqoonta u leh xagga luuqadaha iyo dadka af-soomaaliga wax ku qora si ay u wada shaqeeyaan oo markaa xal loogu helo arrintaas iyo kuwo ka sii muhiimsanba.
Wixii figrad ah waxaad noogu soo diri kartaa eraybixin@somalisoftware.com